लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन भएसँगै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम उच्च « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन भएसँगै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम उच्च
२०७७, १ असार सोमबार १६:०६ मा प्रकाशित
सरकारले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरेको लकडाउनको ढाँचामा गत साता परिवर्तन ल्याएसँगै मानिसहरूको चहलपहल बढ्न थालेको छ। सोमवारदेखि सबै सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी निर्णयसँगै गतिविधिहरू अझै बढ्ने निश्चित छ। लकडाउनको ढाँचामा ल्याइएको परिवर्तनले जनजीवन केही हदसम्म सहज भएको मानिसहरूले बताइरहेका छन्।
पछिल्ला दिनमा तरकारी बजारदेखि किराना पसल लगायत भिडभाड हुने ठाउँहरूमा मानिसहरूले एकअर्कासँग खासै दूरी कायम नगरेको र कतिपयले मास्क पनि नलगाउने गरेको गुनासो सुनिन थालेको छ।तर लकडाउन खुकुलो पारिएको बेला मानिसहरूका सानो लापरवाहीले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण झन् फैलने जोखिम बढाएको भन्दै सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ तथा जनस्वास्थ्यविद्‌हरूले सचेत गराएका छन्।
जोखिम बढेको हो?
मानिसहरूको लापरवाहीका कारण सङ्क्रमण बढ्दै गए राज्यले लकडाउन दोहोर्‍याउन सक्ने सम्भावना रहेको उनीहरू बताउँछन्। जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा आइतवारसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५,७०० नाघिसकेको छ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या १९ पुगेको छ।
यसअघि लकडाउनकै कारण मानिसहरू घरमै बसिरहँदा सङ्क्रमण धेरै फैलिन नपाएको र अस्पतालहरू नभरिएको अवस्था रहेको सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीको ठम्याइ छ। उनी थप्छन्, “सङ्ख्या धेरै बढ्यो र अस्पतालहरूको क्षमताले थेग्न सकेन भने अन्यत्रभन्दा हामीकहाँ मृत्युदर असाध्यै बढ्न सक्छ।” नेपालमा लकडाउन लागु गर्दा र अहिले आएर खुकुलो पार्दा पर्याप्त गृहकार्य नगरिएको जनस्वास्थ्यविद्‌हरू बताउँछन्।
‘नियन्त्रण भएको छैन’
जनस्वास्थ्यविद्‌ डा. शरदराज वन्त भन्छन्, “लकडाउन खुकुलो पार्नुअघि पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो र विकल्पहरू दिनुपर्थ्यो। किनभने महामारी अझै नियन्त्रण भइसकेको अवस्था होइन।”
तर राज्यले गर्नुपर्ने कामसँगै नागरिकको पनि केही जिम्मेवारी रहेको उनी स्मरण गराउँछन्।
“लकडाउन खुकुलो पार्नुलाई सङ्क्रमण सकिएको अर्थमा कदापि लिनु हुँदैन। कार्यालय अथवा बजार जहाँ जाँदा पनि दूरी कायम गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्‍यो।” “हाम्रो लापरवाही र हामीले अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा कमी हुँदा सङ्क्रमण अझ माथि जाने सम्भावना रहिरहन्छ।” त्यसमा डा. सुवेदी पनि सहमत छन्।
“भिडभाड गर्ने र मास्क नलगाउने काम पटक्कै गर्नु हुँदैन। सरकारले गर्नुपर्ने काम कम भएपछि नागरिकले आफ्नो सुरक्षामा आफैँले ध्यान दिनुपर्‍यो,” उनले भने।
लकडाउन खुकुलो पारिएपछि सार्वजनिक गतिविधिमा देखिएका मानिसहरूले खासै सतर्कता नअपनाउनुमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण र त्यसबाट जोगिने उपायबारे राज्यले पर्याप्त जानकारी फैलाउन नसक्नु पनि एउटा कारण हुन सक्ने कतिपयको आरोप छ।
तर त्यो सँगै स्वयम्‌ नागरिकहरू पनि जिम्मेवार रहेको डा. वन्तको बुझाइ छ।
डा. वन्त भन्छन्, “कम्तीमा शहरको एउटा ठूलो तप्काले यसको बारेमा बुझेको छ। कम्तीमा त्यो तप्काले पनि लकडाउन खुकुलो पारिए पनि सतर्कता अपनाउनुपर्ने हो नि।” “हाम्रो आफ्नो तर्फबाट पनि लापरबाही भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ।”
जनचेतना जगाउने सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट यथेष्ठ काम गरिएको जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत गणेश श्रीवास्तवको दाबी छ।
“अलिअलि कमीकमजोरी हुन सक्ला। तर सचेतना फैलाउने कुरा गर्नुपर्दा अहिले स्वास्थ्यकर्मीदेखि महिला स्वयंसेविकाहरूले घरदैलोमै पुगेर जानकारी गराइरहनुभएको छ,” उनले थपे। बानीबेहोरामा परिवर्तनका लागि व्यक्ति आफैँबाट शुरूवात गर्नुपर्नेमा श्रीवास्तवको जोड छ। जनस्वास्थ्यविद्‌हरूका अनुसार मानिसहरूले सावधानी नअपनाएमा र सङ्क्रमण निकै बढ्दै गएको अवस्थामा अर्को ढाँचामा लकडाउन फेरि पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। डा. वन्त थप्छन्, “हामी सङ्क्रमणको पहिलो लहरमै छौँ। पहिलो लहरकै क्रममा एकदमै धेरै सङ्क्रमण बढ्न थाल्यो भने यो [लकडाउनको] सम्भावनालाई कहिल्यै पनि नकार्न सकिँदैन।”बीबीसीबाट साभार